Izipikili ze-Acrylic zifakwe imfashini phakathi kwabesifazane. Umbuzo uvela ngani? Impendulo ilula, ngoba izipikili ze-acrylic zivumela umnikazi wayo ukuba anwebe izipikili, nakuba zikhona ngokweqile, kodwa ngentengo engabizi. Ngaphandle kokufinyeleleka, owesifazane angabonisa ukuthi uqobo lwakhe unamahloni we-acrylic, ngoba imiklamo kanye nezinhlobo zezipikili zama-acrylic ziyisinqumo esikhulu. Kodwa ngezipikili zama-acrylic kukhona ukudoba-ukuthi ungabanakekela kanjani ekhaya? Ngemva kokushiya i-salon yama-nail, owesifazane angase angazi ukuthi benzeni ngezipikili zama-acrylic. Ukunakekelwa okwanele nokungalungile kwezipikili zama-acrylic ekhaya kungase kuvele ukuhlunga, ukwehlukanisa, futhi ngezinye izikhathi ukuthuthukiswa kwe-fungus. Ngakho-ke, umnikazi ngamunye wezipikili ze-acrylic uphoqelekile ukuthi azi ukuthi kufanele anakekelwe izipikili zama-acrylic.
Nazi ezinye iziphakamiso zokunakekela izipikili ezinjalo. Ukuze unakekele kufanele ube nezigilavu ​​ze-raber njll, ithawula, insipho yokulwa ne-antibacterial, iglavu yezinwele zoboya.
Izipikili ze-Acrylic kufanele zihlale zomile, ngoba i-acrylic namanzi akuzona izinto ezihambisanayo. I-Acrylic ehlangene namanzi ingathukuthelisa ubuncane bezinqola, futhi iningi liholele amabhaktheriya, ekuthuthukiseni i-fungus. Futhi kuphela ukulwa nezifo, lokhu akuvumelekile ukuvumela umswakama kwizipikili zama-acrylic. Kodwa lokhu akusho ukuthi awukwazi ukugeza izandla zakho, ukubhukuda echibini, ukugeza, emva kokuxhumana njalo ngamanzi, yome ithawula ngokucophelela ukusula izipikili zakho nezandla.
Ukwelashwa kwe-nail antibacterial
Ukuze ugeze izandla zakho, sebenzisa insipho ye-antibacterial, ngoba amabhaktheriya ayimbangela ejwayelekile yokunciphisa impilo ye-nail ye-acrylic. Ama-bacterium angena embhedeni wesipikili ahlukumeza futhi ahlakulele impilo yonke yezipikili, futhi angathola umonakalo ongenakulinganiswa. Kulesi simo, noma yiziphi izenzo ezihlose ukuvimbela ukuthuthukiswa kwama-bacterium kufanele ziqaliswe ngokushesha. Futhi ukugeza izandla nge-sophi antibacterial yindlela elula kakhulu futhi efinyeleleka kuyo yonke intokazi, ezovimbela ukuvela kwamagciwane. Izikhathi eziningana ngosuku, geza izandla zakho nge-sophi antibacterial, futhi lokho kuzokwanela.
Iiglavu ze-Rubber zokuvikela izipikili
Ngoba lolu hlobo lokunakekelwa kwe-nail lubandakanya nokuvikela kwabo emonakalweni. Sebenzisa amagilavu ​​we-rubber njalo lapho usebenza ekhaya - ugeze phansi noma izitsha. Amagundane ezinjoloba ngezinzipho zakho zama-acrylic ziyisivikelo futhi ngeke avumele ukuthi kwenzeke izingozi ze-pathological, isibonelo, iziphambano nezinye izinto ezifanayo. Ngakho-ke, ngaso sonke isikhathi lapho usebenza nemishini ekhaya, ungakhohlwa ukugqoka amagilavu ​​enjoloba, ngakho-ke akukho izimo ezingalindelekile, njengezicucu eziqhekekile, ube nesethi yamagilavu ​​ekhaya.
Ngaphambi kokulala embhedeni nsuku zonke, hlanza izipikili zama-acrylic ngotshwala. Utshwala luzobhubhisa amabhaktheriya e-pathogenic futhi uhlanze ukungcola. Uma i-varnish yasekuseni ibonakale iphutha, vele usebenzise ingubo entsha ye-nail polish kanti izipikili zizobe zilungile futhi.
Ukulungiswa kwezipikili ze-acrylic ezilimele
Uma izipikili ze-acrylic zilimazekile - i-nail isuke ikhishwa noma ingxenye ye-nail ihlukaniswe, kufanele ngokushesha uye esilonini ye-nail "ukulungisa" okufika ngesikhathi. Kwaphakama umbuzo, kungani masinyane? Noma yikuphi ukuhlukaniswa noma ukuqhuma kwesikhumba se-acrylic kuvula indlela ye-fungus ezokwazi ukungena kalula phakathi kwe-nail yakho yemvelo kanye ne-acrylic nail ye-surface. Yingakho kudingekile ukuba uthintane nochwepheshe ngokushesha ukubuyisela isikhali. Futhi, ochwepheshe bezinzipho uzohlola isimo sezipikili zakho, futhi uma kunesidingo, batusa ukubhekisela kudokotela.
Uma uzwa ubuhlungu obungapheli, ubuhlungu obuqhubekayo nobuhlungu ekhoneni, kukhona uboya obuphuzi noma obuhlaza besisekelo se-nail, bese kubonisa ukuba khona kwe-fungus. Ngakho-ke, kungesizathu sokuthi uthintane nodokotela ngokushesha ukuze ahlolwe futhi athole ukwelashwa okudingekayo.
Ukugcoba nge-gel-varnish ekhaya
Infinity of universes: "cosmic" nyl-design
Ezimweni zenkathazo yesikhathi: Siyazi kahle amasu omzimba womuntu olula
I-apple cider enemibala
Indlela yokwenza i-lavash igqoke nge-saumon, nge-salmon e-pink, ne-tuna
Isinkwa nge-mackerel eshisayo "I-Strawberry"
I-Acrobatics yabaqalayo. Kungenzeka yini ukubhekana nabantu abadala?
Izimfihlakalo kanye nobuqili bokunakekelwa kobuso
Izambatho ze-cocktail zokugqoka zonyaka we-spring-summer 2016: ukubuka ngokuningiliziwe amamodeli wakamuva
Umlenze weWundlu osemasinini oju
Umquba nge-semolina ku-pizza umhluzi